Topic: စာရင်းကိုင်, စာရင်းစစ်, အခွန်
လုပ်ရပ်တစ်ခု၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများအကြားမည်သို့ကွာခြားချက်များရှိပါသလဲ။ မင်းသမီးကအကောင်းဆုံးအဖြေကိုဖြေခဲ့ပေမယ့်အိမ်သာသုံးစက္ကူအကြောင်းကတော့ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်။ ငွေတောင်းခံလွှာဆိုသည်မှာမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း၊
မူပိုင်ခွင့်, franchising ကဘာလဲ? ဥပမာငါးလုပ်ငန်းအကြောင်းကျွန်ုပ်ပိုမိုလေ့လာလိုသည်။ ဒီကဏ္inမှာယှဉ်ပြိုင်မှုသိပ်မရှိတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ တကယ်တော့တကယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုသိပ်မရှိဘူး။
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ D71 K51 ကြိုတင်အစီရင်ခံစာအပေါ် - ငွေ D60 K71 အကောင့်ထဲတွင်ငွေထုတ်ပေးသည် - ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကို) D10 (44) K60 - ကုန်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်း) ထဲသို့သွင်းထားသည့်ချက်လက်မှတ်တွင်ငွေပေးချေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်သူအားလွှဲပြောင်းခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းဝယ်မှုအတွက်မည်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မှာဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စွန့်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဝယ်သူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုရရှိသနည်း။ ...
အခွန်ရှင်းတမ်းတင်ပြပြီးနောက်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအခွန်ဖြတ်တောက်ပြန်လာသော? အခွန်နှုတ်ယူခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုမိတ္တူ ၂ စောင်ဖြင့်တင်ပြသည်။ အခွန်ဌာနသို့မိတ္တူတစ်စောင်နှင့်ဒုတိယတစ်ခုသည် ၀ င်ရောက်လာသည့်အကြောင်းကိုမှတ်စုတစ်ခုနှင့်အတူသင်နှင့်အတူရှိနေသည်။
စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီများ။ စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတွေဘာလုပ်ကြသလဲ, သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဘာတွေလုပ်နေလဲ http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi သင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုရှာဖွေနိုင်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော site တစ်ခုရှိသည် ... ဒီ site တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ...
စာရင်းအင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုစာမူ၏တန်ဖိုးကိုရိုးရှင်းသောဘာသာစကားဖြင့်ရှင်းပြပါ။ ၁) ၆၂.၀၂ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု (တိုးတက်မှု) တွင်ငွေကျပ် ၆၂.၀၂ ငွေ ၆၂.၀၁ တွင်ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ဝယ်သူအနေဖြင့် ၆၂.၀၁ တွင်ဝယ်ယူသူ၏ရရန်ရှိခြင်း။ ဒီဝါယာကြိုးကလုပ်တယ် ...
တစ် ဦး ချင်း ၀ င်ငွေခကိုဘယ်လိုပေးသလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာပေးဆောင်ဖို့, အခွန်ဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ?
တစ် ဦး ချင်း ၀ င်ငွေခကိုဘယ်လိုပေးသလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာပေးဆောင်ဖို့, အခွန်ဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ? အခြားသူများကဲ့သို့ပင် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ဘတ်ဂျက်သို့ငွေလွှဲပြောင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
offsetting အကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။ ရိုးရှင်းသောရုရှားသာ Lyudmila Dmitrievna, မင်းကအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားဟာကျွန်တော့်ဘူသင်ကြားပို့ချသူမဟုတ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းမှာစာရင်းကိုင်! အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု ...
စီးပွားရေး၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ o အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း o ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း o သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးမှုရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်စီးပွားဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ - အမြတ်အစွန်းရရန်၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် - ပCharterိညာဉ်စာတမ်းကိုကြည့်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည် UTII ကိုချက်ချင်းလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား။ အခွန်အာဏာပိုင်နှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီး ၅ ရက်အတွင်းရိုးရှင်းသောအခွန်စနစ်အတွက်လျှောက်လွှာတင်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစတင်သောအခါ ...
စာရင်းသည်…။ ၁၀၀ ရာနှုန်း ၃ Inventory သည် ၃။ အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဘဏ္liာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုသတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲနှင့်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်း။ ပစ္စည်းများ3"...3။ ထောက်ပံ့ရန်…
သူတို့ရဲ့အရှိန်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြန့်ချိအလုပ်လုပ်မြို့တော်ပမာဏ, ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန် ?? ၀ င်ငွေအရင်းအနှီးလည်ပတ်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏အရှိန်နှင့်အရှိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ လက်ရှိနှစ်တွင်ဖြန့်ဝေနေသောပမာဏသည်ပကတိဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ...
ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းမှဘဏ္resultာရေးရလာဒ်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ။ D-90, K-99 အချောထုတ်ကုန်များရောင်းချမှု၏စာရင်းကိုင်နှင့်အခွန်ကောက်ခံမှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏ဥပမာတစ်ခု။ ထုတ်ကုန်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုငွေလွှဲပြောင်းသည့်အချိန်တွင်ဝယ်သူထံသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
စင်ကာပူဆိုတာဘာလဲ? ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စတော့ခ်တိုတိုတွင်ပြန့်ပွားနေသောပစ္စည်းများ - စတော့အိတ်၊ ကုန်ကြမ်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အကောင့် ၁၀ - Subconto - သင်ယခင်ကမသိသောအဆိုအရအကောင့်ကို decipher လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုညွှန်းကိန်း ...
ကုန်သေတ္တာတစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်ရန်အတွက်ငွေမည်မျှလိုအပ်သနည်း။ ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက်က Chelyabinsk ရှိဆိုင်ငယ်လေးတစ်ခုငှားသည်။ အဖွင့်တစ်သိန်းကိုရူဘယ်ကိုယူ။ ထို့နောက်နောက်ထပ် ...
ပြောပါ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှုနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုတို့၏ကွာခြားချက်ကဘာလဲ ဝယ်၌တည်၏။ ဥပဒေများ၌လက်ကားရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအယူအဆမရှိပါ။ လက်လီရောင်းချခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်း ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြချက်ရှိသည်။ လက်ကားလက်ကားသည်နောက်ဆုံးစားသုံးရန်ပစ်မှတ်မရှိဘဲ ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည် ...
အားလပ်ရက်လစာမှရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန်မည်သို့ပို့စ်တင်ရမည်နည်း။ ဘယ်အချိန်မှာပေးချေမလဲ အားလပ်ရက်လစာသည်လစာအတွက်ကြေညာချက်တွင်ပါရမည်။ သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်လစာမှအားလပ်ရက်လစာမှပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန်ကိုအားလပ်ရက်လစာထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်ရွှေ့ပြောင်းရမည်။
အဆိုပါစျေးနှုန်းကဘာလဲ? စျေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခါဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါမည်။ ဈေးနှုန်းမှာတင်ပို့သည့်အခါကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချ၍ မရနိုင်ပါ။ ညွှန်ပြသည့်စျေးနှုန်းမှာကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စျေးနှုန်းများကိုဆိုလိုသည်။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ရဲ့ဂဏန်းတွက်စက်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ ပြင်ဆင်ပြီးရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်တွက်ချက်ကဒ်များကိုရေးဆွဲပါ။ အတော်လေးလောကီနှင့်ရှုပ်ထွေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ မှန်ပါသည်၊ ယခုအထူးရှိနေသည် ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,145 စက္ကန့်ကျော် Generate ။